यौन सन्तुष्टी भएन ? यसरी घरेलु विधिबाट क्षमता बढाउनुहोस् - Khabar Break | Khabar Break
यौन सन्तुष्टी भएन ? यसरी घरेलु विधिबाट क्षमता बढाउनुहोस्
यौन मानिसको आधारभूत आवश्यक्ता मध्येका एक अभिन्न पाटो हो । यौन मान जीवनमा मात्रै हैन संसारका सबै प्राणीको लागि आवश्यक्ता छन् । फरक यति हो प्रस्तुति । मानिस र जीवजनतुबीच यौन मात्रै भिन्नता छैनन् । प्रत्येक क्रियाकलापमा भिन्नता पाइन्छ । देखिन्छ । फरक मानिस संसारकार सर्वश्रेष्ठ प्राणी भएको उसको क्रियाकला भिन्न छन् । अन्य जीवजन्तु भन्दा संवेदनशील छन् । तर, पनि यौन मानिसको लागि अत्यान्तै आवश्यक हो ।
यौन प्रणाली प्राकृतिक आवश्यक्ता नै हो । हुन त आधुनिक संसारमा यौन सनतुष्टि पार्ने साधन निर्माण भैसकेका छन् । बने पनि मानिसहरू सन्तुष्ट भएका छैनन् । बनेका साधनहरू स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न गराएको तथ्यहरू सुनेका छौँ । पढेका छौँ । तर, मानव निर्मित साधन प्रयोग नगरी पनि यौन सन्तुष्टि लिन सकिन यौन विज्ञहरूले बताएका छन् । उनीहरूको अनुसार घरेलु औषधी प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा कुनै समस्या उत्पन्न नहुने पनि दाबी छ । आउनुहोस् आज त्यहीँ घरेलु औषधीको माध्यमबाट यौन सन्तुष्टि बढाउने उपाय सिकौँ ।
भिटामिन ‘सी’ले भरिपूर्ण भिंडीको नियमित सेवनले तपाईँको सेक्स पावरमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । जिङ्कको कमीले हुने यौन उत्तेजनमा कमीलाई यसको सेवनले परिपुर्दी गर्दछ । भिंडीको सेवनले थकान कमजोरी आदि समस्याको समाधान हुन्छ ।
प्राय सम्पूर्ण मानिसहरूले गाजरको प्रयोग गरी नै रहेका हुन्छन् । तर पनि यसको विशेषता बारे धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । गाजरमा हुने भिटामिन ‘ए’ ले धेरै नै शक्ति प्रदान गर्दछ । गाजरले पुरुषहरूमा यौन क्षमतामा पनि त्यही अनुपातमा वृद्धि गराउँछ । भिटामिन र सेक्समा निकै नै गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ । भिटामिनले पुरुषको शुक्राणु निर्माणमा तथा कामशक्ति बढाउन विशेष सहयोग पुर्याउंछ । विशेष गरी गाजरमा रहेको भिटामिनले यो कार्य गर्दछ ।
गोलभेँडामा हुने लियोपिनले पुरुषको कामशक्ति बढाउनुको साथै यौन उत्तेजनामा हुने समस्याको समाधान गर्दछ । साथै पुरुषमा हुने प्रोस्टेन क्यान्सर पनि गोलभेँडाको नियमित सेवनले निको पार्दछ ।
लसुन जस्तै प्याजमा पनि पौष्टिक तत्त्व हुने हुनाले लसुनले जस्तै गरी यसले पनि सेक्स पावर बढाउन मद्दत पुर्याउंछ ।
लसुनमा हुने पौष्टिक तत्त्वले रगत सर्कुलेसनमा मद्दत पुर्‍याउँछ । यसले रगतलाई अझै तीव्र बनाउने हुनाले सेक्स पावरमा पनि वृद्धि गर्दछ ।